तपाइँ किन नयाँ Gmail नीतिहरु पछि iCloud मा स्विच गर्नुपर्छ? | आईफोन समाचार
तपाइँ किन नयाँ Gmail नीतिहरु पछि iCloud मा स्विच गर्नुपर्छ?
सम्भवतः तपाईहरु मध्ये धेरैले सम्झना पाउनुहुनेछ कि Google नारा जुन यो saidनराम्रो नहुनु«। के उनले रक्षा गर्थे कि उनका सेवाहरू प्रतिस्पर्धा भन्दा राम्रो थियो। तर यस्तो लाग्छ कि उनीहरूले पहिले नै सामाजिक सञ्जालमा सफलताको रहस्य फेला पारेका छन्, गुगल प्लस अघि धेरै असफल प्रयासहरू पछि, भूतको एक बिट हुनु त्यति खराब छैन। कमसेकम नयाँ को दृश्यमा नीतिहरू जुन Gmail मा लागू गरिएको छ.
यदि तपाईंले अझसम्म यसको बारेमा सुन्नु भएन, यस अवस्थामा गुगलले भर्खरै आफ्नो उपधारामा परिवर्तनहरू घोषणा गरेको छ र गुगल प्लस प्रोफाइलको दुरुपयोगसँग यसको हात हल्लाएको छैन। अब कुनै पनि जीमेल खाताको साथ प्रयोगकर्ताले उनीहरूको ईमेल सार्वजनिक नभएको खण्डमा अपरिचितहरूले सम्पर्क गर्न सक्दछन जो उनीहरूलाई गुगल प्लस मार्फत सम्पर्क गर्दछन् (प्रोफाइल निजी हुन सक्दैन)। त्यो हो, तपाईको डाटा कहिले पनि थाहा पाउँदैन। यस कारणका लागि, सायद अब आईफोनरोसका प्रेमीहरूलाई जीमेल प्रणाली, तिनीहरूले नेटिभ प्रणालीमा स्विच गर्ने बारे सोच्न पर्छ iCloud.
गुगलको पहलले गुगल प्लस परिचय पत्र बनाउनको लागि यसको प्रयासलाई प्रतिक्रिया गर्दछ। यो पहिले नै भएको छ, YouTube को प्रयोग को मामला मा। र अब, धेरै जसो उनीहरूले G + प्रोफाइलहरू सिर्जना गरेका थिए, पहुँचको एक रूपको रूपमा, तर उनीहरूको बारेमा बिर्सेका छन्, चिन्ता गर्न थालेका छन्। विकल्प, जुन सबै खातामा पूर्वनिर्धारित द्वारा पहिले नै सक्रिय छ, एक strainer हो spamers, अपरिचित, र जान्नको लागि कति धेरै चीजहरू।
तसर्थ, यदि पहिले नै आईक्लाउडसँग जीमेलमा केहि फाइदाहरू थिए, जस मध्ये केही नयाँ अद्यावधिकको साथ आएका थिए, अब गोपनीयताको मामलामा तिनीहरूको श्रेष्ठता स्पष्ट देखिन्छ। र यदि तपाईले हालको जीमेलको सट्टा आईक्लाउडको लागि छनौट गर्नुभयो भने, तपाईले मेल सेवा पाएको जस्तो घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले किन्नु भएको कुनै आईओएस वा म्याक ओएस एक्स उपकरणमा पूर्ण नि: शुल्क आउँछ।
थप रूपमा, केवल तपाईंको ईमेल ठेगानालाई चिन्नेहरू उहाँ मार्फत तपाईंलाई सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। र यदि यो पर्याप्त थिएन भने, एप्पल, कम्तिमा यस क्षणको लागि, तपाइँको भण्डारण डेटा यसको विज्ञापन लक्षित गर्न प्रयोग गर्दैन। गोपनीयता मा, अब कम्तिमा, iCloud यो खेल जित्नुहोस्।
र ती व्यक्तिहरू जसले जीमेल छोड्न र यसलाई आईक्लाउडमा परिवर्तन गर्नका लागि तयार छैनन्, यो नोट गरिनु पर्छ कि गुगलले डिफॉल्ट रूपले सक्रिय पार्ने विकल्पलाई सेटिंग्समा निस्क्रिय गर्न सकिन्छ, तर यो सूचना बिना उनीहरूले सबै प्रयोगकर्ताहरूमा राखेका छन्, यसको गोपनीयतालाई हमला गर्दै। बारेमा धेरै भन्छन् Google भित्र रहेको भूत तिमीलाई लाग्दैन?
थप जानकारी - नयाँ इनबक्स प्रस्ताव गर्न आईओएसको लागि जीमेल अपडेट गरियो
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » iCloud » तपाइँ किन नयाँ Gmail नीतिहरु पछि iCloud मा स्विच गर्नुपर्छ?
तिनीहरू पोस्टको लेखकको रूपमा उही राक्षस बोक्दछन् जब अन्तमा टिप्पणी गर्दछ कि यो वैकल्पिक हो र यसलाई निष्क्रिय गर्न सकिन्छ ...
Pablobv लाई जवाफ दिनुहोस्
Trascendent यात्री (@Infinity_kamui) भन्यो
यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूले एप्पलका नीतिहरू र आईक्लाउडले सरकारमा फिर्ता लिने सबै कुरा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सक्दछ भन्ने तथ्यहरूको बारेमा धेरै पढेका छैनन्। एप्पलले सामाजिक नेटवर्कमा उही रणनीति प्रयोग गर्न सक्दैन भन्ने तथ्यमा एप्पल त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सबै प्रयासमा असफल भएको छ भन्ने तथ्यमा रहन्छ, एकदम खराब ग्रेड।
Trascendent Traveler (@Infinity_kamui) लाई जवाफ दिनुहोस्
एक Applefan बाट ठेठो नोट, यदि त्यो विकल्प यो असक्षम गर्न सम्भव छ भने किन उनीहरु यो संग कम गर्न को लागी। Icloud मलाई जिमेल भन्दा धेरै तल देखिन्छ। बरु, म एक असंवेदनशील र पहेंलो नोट देख्छु।
गुगलले सबैलाई एक ईमेल पठाएको छ, यो सत्य हो कि तिनीहरूले केहि कुरा नगरीकन यसलाई सक्रिय गरेका छन्, तर त्यो ईमेलमा उनीहरूले धेरै राम्ररी वर्णन गर्छन् र चरण by चरणमा यो विकल्प कसरी निष्क्रिय गर्ने भनेर वर्णन गर्दछन्। सहकर्मीहरूले भनेझैं यो धेरै प्रशंसक नोट भएको छ।
Enumus लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईले मलाई भन्न सक्नुहुनेछ कि म यसलाई कसरी निस्क्रिय पार्न सक्छु, मैले मेल पाएँ तर मैले यसलाई मेटाएँ र मलाई थाहा छैन कि यो कसरी निष्क्रिय गर्ने हो।
मैले लामो समयदेखि जीमेलबाट आईक्लोउडमा स्विच गरेको छु।
के मैले बुझ्न सकिनँ ... के यो एप्पल आईडीमा तपाईंले बाह्य मेल प्रयोग गर्नुपर्नेछ (उदाहरणका लागि मैले जिमेल प्रयोग गर्छु)। सारांशमा, तपाईंसँग एप्पल आईडी र सम्बन्धित आईक्लाउड मेल हुन सक्षम हुन आईक्लोउडमा बाह्य मेल हुनुपर्छ।
यसको सन्दर्भमा म यसलाई जीमेल, हटमेल, आदि जस्तो हुन चाहन्छु।
म तपाईंको कुरा बुझ्दछु, तर के मानसिक मानसिकता केहि यस्तो नोट लेख्न।
के भन्नु हुन्छ यदि तिनीहरूले टिप्पणीमा लगभग सबै कुरा भनेको छ:
नोटमा भन्नु हुँदैन
एक धेरै आवाज को लागी यो अक्षम र सेट गर्न सकिन्छ
आइक्लाउडका लागि बाह्य ईमेलको लागि राखिएको
यो पनि थप्न सकिन्छ
- googledrive मा अधिक स्पेस, नि: शुल्क
- विकल्प जुन तिनीहरूले तपाईंलाई ईमेल पठाउन सक्दछन् यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूलाई तपाईंको ईमेल थाहा छ, साथै गुगल + मार्फत पठाइएका ईमेलहरू यसको लागि फोल्डरमा जानुहोस्, यदि तपाईं निश्चित समयमा जवाफ दिनुहुन्न भने त्यो व्यक्ति हुँदैन। गुगल + को माध्यमबाट तपाईंलाई ईमेलहरू पठाउन सक्षम। मलाई लाग्दैन कि उनीहरूले स्पाम गर्न सक्दछन् यदि तपाईं जवाफ दिनुहुन्न भने
त्यो एप्पलले गर्दैन… .. तपाईले आइकल्डका सर्तहरू वा अनुप्रयोग स्टोर पढ्नुपर्नेछ। उदाहरणको उत्तरार्द्धमा यसले तपाईंलाई भन्छ कि एप्पल आईडी र अन्य बन्द गर्न सक्दछ; चेतावनी बिना र जेसुकै कारणको लागि तिनीहरू के चाहन्छन् जुन तपाईंलाई खर्च गरिएको थियो ..... र तपाईंले यसलाई गुमाउनुभयो; किनकि तपाईं अपडेट गर्न सक्नुहुन्न र कसरी तपाईं आफ्नो आईफोन वा अरूलाई अद्यावधिक गर्नुहुन्छ …… त्यो एप्पलले डाटा दिदैन; यदि उसले यो पनि भन्छ, उसले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्षम हुनेछ; हामीले तिनीहरूको कम्पनी वा तेस्रो पक्षहरूमा उनीहरूलाई प्रयोग तोक्दछौं। र अधिक jollitas। के हुन्छ Google ले राख्न चाहन्छ वा यदि g + कि कोही वा केहि प्रयोग गर्दैन। किनकि फेसबुक अधिक प्रयोग गरिएको छ, र अरूहरू… .. यो उदाहरणको लागि तिनीहरूले YouTube मा टिप्पणी गर्न के गरे… ..
तर यो एप्पलले गर्दैन र त्यो सन्त हो… ..
यस्तो देखिन्छ कि हामी किन कम्पनी बनाइएको हो भन्ने आधारभूत नियम बिर्सन्छौं; पैसा कमाउन। परोपकारी बहिनीहरूबाट होईन। र दुबै गुगल र एप्पल तिनीहरू के गर्छन्, एउटा टर्मिनलको साथ त्यहाँ जस्तो छ र उनीहरूले पछाडि बदल्छन् र हामीसँग पहिले नै नयाँ मोबाइल छ, र अर्को अन्य चीजहरूको साथ।
जे भए पनि ..... .. को एक र अर्को पैसा बनाउन को लागी बनाइएको रोक्न बन्द गरौं
खैर, नोट मलाई राम्रो लाग्यो, दिनको अन्त्यमा सम्पादकले पनि आफ्नो राय लिन सक्छ जबकि समाचारले रिपोर्ट गरेको छ र स्पष्ट रूपमा भने छ कि विकल्पलाई निस्क्रिय गर्न सकिन्छ, त्यसैले यस अर्थमा निन्दाको कुनै कुरा छैन। व्यक्तिगत रूपमा म Gmail प्रयोग गर्न जारी राख्छु, तर विकल्प option असक्षम गर्दै
सेकाबेललाई जवाफ दिनुहोस्
दुधहरू, म खबरहरू हेरिरहेको थिएँ र म यसलाई विश्वास गर्दिनँ, म यसको लागि उपकरणहरूको राम्रो कामका लागि एप्पलको पागल हुँ, तर त्यहाँ त्यस्तो चीजहरू छन् जुन कहिल्यै उत्तम हुँदैन (उनीहरूलाई पास्ता पनि मनपर्दछ) .. गुगल यी मुद्दाहरूमा राजा हुन्, र समाचार बुल्शिट छ। कुराको लागि कुरा गर्नुहोस्।
इग्नासियो गार्निका भन्यो
मैले पहिले नै आईक्लाउड (::
Ignacio Garnica लाई जवाफ दिनुहोस्
कृपया !!! कस्तो pauperrima र प्रचार नोट! यदि विकल्प निस्क्रिय गर्न सकिन्छ, यो यति धेरै समस्या बनाउन को लागी छैन! यसका साथै तपाईले जिमेललाई आईक्लोडसँग कहिले पनि तुलना गर्न सक्नुहुन्न।
Kenzoar लाई जवाफ दिनुहोस्
गुगलमा कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर तपाईं व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ? धन्यबाद।
Deilers लाई जवाफ दिनुहोस्
deilers, तपाईं gmail मा जानु पर्छ -> सेटिंग्स, (दायाँमा गियर व्हील) -> सेटिंग्स, पहिलो ट्याबमा (सामान्य) -> Google मार्फत ईमेल पठाउनुहोस्: -> कसैलाई वा अर्को विकल्प राख्नु हुँदैन।
मलाई मन पर्छ कि सबैजनाले आफ्नो मनपर्ने ईमेल प्रणाली छनौट गर्छन्। तपाईंहरू जो भन्छन कि यो समाचार मूर्खतापूर्ण छ, केवल भन कि मैले आफ्नो विचार व्यक्त गरेको छु, मैले नयाँ गुगल समारोहको आलोचना गरेको छु किनभने यो मेरो लागि अस्वाभाविक देखिन्छ र यो पूर्वनिर्धारित रूपमा पनि छ र मैले ठीक यो बहस उत्पन्न गर्न खोजेको छु कि आज हामीसँग छ।
अवश्य पनि, iCloud कुनै पनि हिसाबले त्यस्तो सर्वोत्तम हुन सक्दैन। र म मेरो मामलामा एक ifangirl होइन। मैले Gmail मा विकल्प पनि असक्षम गरेको छु। र म iCloud प्रयोग गर्छु। दुई असंगत छैनन्। यद्यपि म गुगलको बारे मा खुशी भएन
सबैलाई अभिवादन र टिप्पणीको लागि धन्यवाद !!
म «पत्रकार understand बुझ्छु। उनीहरूसँग सेबको बारेमा लेख्न केहि छैन, त्यहाँ कुनै नवीनता छैन, त्यहाँ कुनै समाचार छैन, त्यहाँ के छैन "जनताले सोध्छन्।" नयाँ आईफोनको लागि एक बर्ष हराइरहेको छ, नयाँ आईप्याडको लागि पनि .. र तिनीहरूले केहि पनि ल्याएनन्, हामी कसरी औंठाछाप पाठकको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं जुन months महिनामा काम गर्न रोकिन्छ?
महिला, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईले एन्ड्रोइड किन्नुहोस् र यो लेख्न सुरू गर्नुहोस् कि तपाईको बारेमा थाहा पाइसकेपछि यो कत्ति अद्भुत हुन्छ।
मसँग आईफोन थियो र मैले एन्ड्रोइडमा स्विच गरे ... अहिलेको लागि, म यहाँबाट जाँदैछु।
Totopo_arg लाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंलाई आश्वसन दिन्छु कि एप्पलको बारेमा धेरै कुरा लेख्नु छ। यसको प्रमाण यो हो कि हामी प्रत्येक दिन हाम्रो ब्लगमा बाहिर जान्छौं। तपाईंको सिफारिशको लागि, हालसालै सम्म म पनि एक एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता थिए, विशेष गरी सोनी एक्सपेरिया, जुन मबाट चोरी भएको थियो। आईओएस र एन्ड्रोइड भिन्न छन् र प्रत्येकको आफ्नै फाइदा र विपक्षहरू छन्। तपाईको केसमा मैले के बुझ्ने छैनु कि एप्पलको रक्षा गर्न तपाईले मेरो दृष्टिकोणलाई धेरै आलोचना गर्नुभयो, र तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्न कि तपाईले गुगललाई बचाउदै हुनुहुन्छ कि यो नयाँ नीति तपाईको गोपनीयता बिरूद्ध जान्छ र तपाईलाई हानी गर्छ। यो निस्क्रिय गर्न सकिन्छ, ठीक। तर यसको मतलब यो होइन कि "अनैतिक" को लागी आलोचना न्यायसंगत भन्दा बढी छैन।
कसरी ग्यारेजब्यान्डको साथ आईफोन रिंगटोनहरू सिर्जना गर्ने